Olee otú naghachi faịlụ furu Cut na Paste e
> Resource> Naghachi> Olee otú iji naghachi faịlụ furu Cut na Paste
Olee otú Naghachi Lost Files mgbe Ịcha na pasting nchekwa?
Ndewo, m chọrọ enyemaka na ịkpụ mado mgbake nke. Agafere m a nchekwa, nke e dere 2GB uru nke oyiyi (nwa m nwa snaps), iji a USB flash mbanye site ịcha na pasting. O di nwute na m flash mbanye mebiri emebi-adịbeghị anya na m na-efu m niile photos. Bụ n'ebe ọ bụla software / usoro na m nwere ike na-agbalị iji naghachi foto m?
Ọtụtụ ọrụ na-atụle na ha faịlụ ga furu efu ruo mgbe ebighị ebi mgbe ịcha na pasting ọrụ. Ma nke a abụghị n'ezie eziokwu. Ozugbo faịlụ na-ebipụ na pasted si gị mbanye, ha ga-kọwara dị ka keerughi data na-eche maka na-overwritten site ọhụrụ faịlụ gị mbanye. Ị ka nwere ohere iji weghachite ha na a ụfọdụ ịkpụ mado mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ otu nke kasị mma na omume na-agbake bee mado data na mfe na a pụrụ ịdabere ụzọ. Ọ bụ ike iji weghachi niile nkịtị faịlụ na ụdị furu ịkpụ na mado, gụnyere oyiyi, videos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ, wdg The ngwá ọrụ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara maka Windows na kọmputa na Mac, nakwa dị ka nchekwa ngwaọrụ dị ka kaadị ebe nchekwa, flash mbanye na mpụga ike mbanye.
Dị ka ọ bụ ike ịgwa ma faịlụ furu efu mgbe ịcha na pasting nwere ike natara ma ọ bụ, a dị ike omume na-enye gị a free ikpe mbipute ike iṅomi ngwaọrụ gị tupu gị mgbake. Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute si n'okpuru naghachi ịkpụ mado data ugbu a!
Naghachi Files furu ịkpụ na mado na 3 Nzọụkwụ
Aga m ịrụ ịkpụ mado mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwere ike naghachi ịkpụ mado data na Mac version na yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi furu efu faịlụ mgbe ịcha na pasting nchekwa
Dị ka n'okpuru image ngosipụta, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode naghachi bee mado data mgbe launching usoro ihe omume.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachi ịkpụ mado faịlụ site na kọmputa gị, biko adịghị wụnye ihe omume na nkebi / ụgbọala ebe furu efu faịlụ odude.
Nzọụkwụ 2 iṅomi nkebi / ụgbọala anya n'ihi na ịkpụ na mado faịlụ
Ebe i nwere ike họrọ nkebi / mbanye ebe gị faịlụ na bee na pasted si na pịa "Malite" button na-amalite na-achọ faịlụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na faịlụ na bee na pasted si mpụta nchekwa na ngwaọrụ, i kwesịrị jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 3 naghachi faịlụ furu ịkpụ na mado
Mgbe scanning dị n'elu, ị nwere ike ele hụrụ faịlụ aha na ịhụchalụ ụfọdụ faịlụ formats dị ka photos elele ma ịkpụ na mado data nwere ike natara ma ọ bụ.
Ọ bụrụ na ha na-ahụrụ, ị nwere ike họrọ ha na pịa "Naghachi" zọpụta ha ka ha ọzọ nkebi / mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ na-agbake furu efu ma ọ ehichapụ faịlụ site WD My Passport Draịvụ
Recuva maka Mac OS X El Capitan
Olee otú Naghachi ehichapụ Photo & Video si Nokia ekwentị mkpanaaka na
3 Nzọụkwụ naghachi Photos si Olympus Igwefoto